समुद्री खाना सलाद | ThermoRecines
समुद्री खाना सलाद
सुरूवात25 मिनेट3 व्यक्ति350२ क्यालोरी
कसले कहिल्यै तयार गरेको छैन रसियन सलाद? यो एक गर्मी को नुस्खा हो, यति सजिलो र सस्तो कि पक्का सबैलाई पनी थाहा छ। त्यसोभए, यदि तपाईंलाई यो विशिष्ट डिश मनपर्दछ भने, म पक्का छु कि तपाईंले समुद्री खाना सलाद मनपराउनुहुनेछ।
क्लासिक तयारीमा हामीले केहि थपेका छौं झगडा जुन तरकारी र अण्डाहरूको रूपमा एकै समयमा पकाइन्छ। त्यसो भए यो केवल केहि समावेश गर्न बाँकी छ काकल्स र केहि सुरिमी स्टिकहरू र हामीसँग पहिले नै बिभिन्न र स्वादिष्ट पकवान छन्।
यस समुद्री खाना सलाद प्रस्तुत गर्न उत्तम तरिका योसँग अलि अलि अगाडि बढ्नु हो मेयोनेज o ल्याक्टोन्स, जुन एक राम्रो प्रस्ताव संग डराउनबाट जोगिन हो साल्मोनेलोसिस। तपाईले रोज्नु भएको कुनै चटनीमा यो स्वादिष्ट हुनेछ!
1 समुद्री खाना सलाद
समुद्री खाना सलाद एक नुस्खा हो जुन परम्परागत रूसी सलादबाट सुरू हुन्छ। यो समुद्री खानाबाट बनाइएको हो जस्तै काकल्स, टुना, र झींगा।
कुल समय: 25M
२ vegetables० तरकारीहरू (आलु, गाजर, मटर ...)
Pra झींगा वा झींगा
3 क्र्याब स्टिकहरू
१ प्राकृतिक ककल्सको
१ प्राकृतिक ट्यूना को
१०० g मेयोनेज
काटिएको तरकारीलाई वरोमा र झींगा वा झींगालाई वरोमा ट्रेमा राख्नुहोस्। ढक्कन र रिजर्वको साथ बन्द गर्नुहोस्।
गिलासलाई g०० ग्राम पानीले भर्नुहोस्, उदार चुटकीमा नुन थप्नुहोस् र टोकरीलाई अण्डामा राख्नुहोस्। कभर बदल्नुहोस् र वरोमालाई स्थितिमा राख्नुहोस्। कार्यक्रम Minutes मिनेट, Varoma तापमान, गति २। १ minutes मिनेट पछि, शेलफिस पकाइएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् र हटाउनुहोस्। अन्यथा ढकनी फेरि बन्द गर्नुहोस् र खाना पकाउन जारी राख्नुहोस्।
ककल्स, ट्युना र जैतुनहरू निकाल्ने क्रममा ताकि उनीहरू अधिक मात्रामा तरल पदार्थ बोक्दैनन्।
समयको अन्त्यमा, ध्यानपूर्वक वरोमा हटाउनुहोस्। पकाउने काट्न तरकारीहरू ताजा गर्नुहोस्। पकाएको अण्डालाई पनि ताजा गर्नुहोस् र छीलो।
पानी छोड्नुहोस् र गिलास नधोई पग्लिएका क्र्याब स्टिकहरू र अण्डाहरू राख्नुहोस्। समयमा काट्नुहोस् Seconds सेकेन्ड, गति 3। फराकिलो स्रोतमा सेवानिवृत्त हुन र ढलिएको तरकारीसँग सामेल हुन। राम्ररी निकालिएको ट्यूना र काटिएको जैतुनहरू थप्नुहोस्। शेलफिशको बोक्रा ताछ्नुहोस् र काट्नुहोस् र सलादमा थप्नुहोस्। नुन र फ्रिजमा रिजर्वको साथ मौसम।
सेवा दिँदा, मेयोनेज थप्नुहोस् र हलचल गर्नुहोस् ताकि सबै सामग्रीहरू सॉसको साथ गर्भवती हुन्छ। वा यसलाई छुट्टाछुट्टै सेवा गर्नुहोस् ताकि प्रत्येक अतिथिलाई उनीहरूको रुचि अनुसार राख्न सकिन्छ।
थप जानकारी - मेयोनेस सस / ल्याक्टोनस
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: १/२ घण्टा भन्दा कम, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » समयको लागि » १/२ घण्टा भन्दा कम » समुद्री खाना सलाद
तरकारीका साथ दाल
चिक्की र गाजर क्रीम